Samachar Batika || News from Nepal » हो मैले काम सके त्यसपछि अजितालाई लगेर फा’ले !
हो मैले काम सके त्यसपछि अजितालाई लगेर फा’ले !
गत माघ ४ गते बिहान मृ त अवस्थामा फेला परेका तेस्रो लिंगी अजिता भुजेलको ह त्या भएको पुष्टि भएको छ । उक्त घ ट नामा संलग्न पाँच जनालाई प्रहरी प क्रा उ गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीले अझै दुई जना भने फ रा र रहेको जनाएको छ ।
हेटौंडाको क्याम्पडाँडामा भुजेलको श व फेला परेको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका –११ की तेस्रो लिङ्गी अजिता भुजेलको भएको भन्दै परिवारका सदस्य र निलहिरा समाजले अनुसन्धानको माग राखेका थिए । प्रहरीले पनि घ ट ना सं’का’स्पद रहेको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । घ ट ना भएको १५ दिन पछि संलग्नहरु सार्वजनिक भएक हुन् । अजितामाथि घ ट ना घ टा एर लगिएको मोवाइल ‘अन’ भएपछि प्रहरी यिनीहरु समक्ष पुग्न सफल भएको थियो । अजिता माथि ४ जनाले स म्पर्क गरी घ ट ना घ टा ए को प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको छ ।
प्रकाशित मिति २१ माघ २०७६, मंगलवार १३:५०